‘जातमा सानो ठुलो कोहि हुन्न: काटे एउटै रगत आउँछ, मरेर सबै खरानी हुने हो ’ : सिमा बस्नेत (उनको निक्कै मार्मिक लेख ) – पुरा पढ्नुहोस्……
‘जातमा सानो ठुलो कोहि हुन्न: काटे एउटै रगत आउँछ, मरेर सबै खरानी हुने हो ’ : सिमा बस्नेत (उनको निक्कै मार्मिक लेख )
सिमा बस्नेत आज दलितको बारेमा लेख्न मन लाग्यो । कसले कस्ले बनायो मान्छेलाई दलित ? को हो दलित ? किन हेपिन्छ दलितलाई ? सानो जाती, दलित जातीको अस्तित्व ,पहिचान त प्राचीन शास्त्रीहरुले राखेर गए । यसमा कसको के दोष छ र ? कामको आधारमा मान्छेको पहिचान सानो जातीले गर्नुपर्ने भनेर बाड्फाड गरिदिए । के यसमा न्याय भयो र ?
Posted in विचार, सामाज
Prevयी ड्राइभर जो कतारमा बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनि यसरी प्रचार गर्छन् ….
Nextपत्रकार रबि लामिछाने लगायत १०० जना ब्यक्तिहरु सम्मानित
रवि लामिछानेको विवाहबारे माताले गरिन् अहिलेसम्मकै अचम्मको यस्तो भविष्यबाणी हेर्नुहोस् (भिडियो सहित )